यदि तपाइँ डेस्कटप कम्प्युटरको साथ अनलाइन शपिंग गर्नुहुन्छ भने हामीसँग तपाईंको लागि अद्भुत प्रस्ताव छ! यो स्वागबक्स ब्राउजर विस्तार हो जुन तपाईं गुगल क्रोम वा इन्टरनेट एक्सप्लोररका लागि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
Swagbucks ब्राउजर विस्तारको साथ, तपाईं फिटनेस उत्पादनहरू र तपाईंको मनपर्ने अनलाइन स्टोरहरू जस्तै अमेजन, ईबे, वालमार्ट, लक्ष्य, इत्यादिमा पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं चयन स्टोरहरू, विशेष कुपनहरू, र तपाईंले प्राप्त पनि नगद फिर्ता प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईं साइन अप गर्दा तिनीहरूबाट नि: शुल्क $ १० बोनस। यस Swagbucks ब्राउजर विस्तारको बारेमा सबै भन्दा राम्रो पक्ष हो कि यो डाउनलोड गर्न को लागी १००% नि: शुल्क छ भने निश्चित गर्नुहोस् आज डाउनलोड गर्नुहोस् पैसा बचत गर्न र फिर्ता नगरी कमाई!
एकचोटि तपाई Swagbucks को लागी साइन अप गर्नुभयो, तपाई सदस्यले तपाईको खाताको Swag अप सेक्सनमा बोनस "सक्रिय" गर्नुपर्नेछ। बोनस मान पोइन्ट्सको रूपमा कमाईन्छ, एसबी भनिन्छ। १००० एसबी बोनस पाउनुहोस्, जुन मूल्यमा १० डलरको बराबर हो, जब तपाई Swagbucks.com/Shop मा चित्रित स्टोरमा कम्तिमा $ २ spend खर्च गर्नुहुन्छ। तपाईंले यस खरीदको लागि कम्तिमा २ S SB प्राप्त गर्न अनिवार्य छ, जुन तपाईंले 1000० दिन भित्रमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। MyGiftCardsPlus.com र यात्रा खरीदहरू योग्य हुँदैनन्।